I-Air Purifer Factory - Abakhiqizi Bomoya baseChina, Abahlinzeki
Isihlanzimoyeni / Esigqokekayo / AP-W01
Lesi sihlanzisi somoya esiwumgexo sikhipha i-ioni ye-oksijeni engemihle, sihlanza umoya okuzungezile, sikwenzele indawo enempilo, sisuse ukungcoliswa komoya njengothuli, i-PM2.5, impova, intuthu njll. , impophoma, noma intaba) eceleni kwakho. Uzozizwa sengathi usehlathini. Nomaphi lapho uya khona, kuhlanza i-1m³around you, kwakha ukuhamba kokuvikela umbuthano ukukuqapha. Ngakho-ke ungakhathazeki ngenkinga yokungcola, umgexo womoya ohlanzekile uyohlala ukukusonga, uzohlala usendaweni ephephile eyakudalela yona.
Lo mgexo womoya omubi nawo usebenza ekwelapheni ukudangala, ukuqwasha, imizwa, futhi kuthuthukise ikhwalithi yokulala, futhi ama-decibel ama-5 wokusebenza okuhle athule anika amandla ikhwalithi yakho yokulala kahle ngenkathi unakekela amaphupho akho ukuthi angaphazanyiswa.
Ibhethri layo elikhulu lingahlala amahora ayi-10-12, lanele izidingo zakho zosuku lonke, nokushaja okusheshayo, zilungele izidingo zosuku lwakho olulandelayo.
Yigqoke entanyeni yakho, kulula ukuyiswa noma yikuphi, intambo esezingeni elihle elengayo, isisindo esincane, akukho ingcindezi yokuyigqoka entanyeni. Futhi ukwakheka kwayo okuhle kukwenza ube umhlobiso omuhle. Futhi iyatholakala ukuthi ilungiswe emgodini wemoto noma ibekwe etafuleni.
Inketho enhle yokwenyuswa komkhiqizo. I-logo ingaphrintwa noma nge-laser.
Isihlanzimoyeni / Esigqokekayo / AP-W02
Ngalesi sihlanzisi somoya esigqokekayo ungazivikela kahle wena nabathandekayo bakho, noma sincane kakhulu singasebenza endaweni eyi-1m³ ngaphandle noma 3m³ endlini ukudala indingilizi evikelayo. Lo mgexo womoya ohlanza umoya ukhipha ama-ions oksijini ayizigidi ezingama-6.5, uhlanza umoya okuzungezile, wakwenzela indawo enempilo, ususe ngempumelelo ukungcoliswa komoya njengothuli, i-PM2.5, impova, intuthu njll futhi uletha ama-molecule afanayo atholakala ezindaweni ezingaziwa (... ibhishi, impophoma, noma intaba) eceleni kwakho. Uzoba nomuzwa wokuthi usehlathini. Nomaphi lapho uya khona, kuzohlanza igumbi elingu-1m around elikuzungezile, kwakheke indilinga yokuhamba ekuvikeleni. Inqobo nje uma unesihlanzisi somoya somgexo, ungakhathazeki ngenkinga yokungcola, izokugoqa njalo, uzohlala usendaweni ephephile ukuthi iyakusebenzela.
Lo mgexo womoya omubi nawo usebenzela ukuphulukisa ukudangala, ukuqwasha, imizwa, futhi kuthuthukise ikhwalithi yokulala, ukusebenza okuhle kakhulu okuqinisekisa ikhwalithi yakho yokulala futhi awazihluphi ngamaphupho akho.
Ibhetri yayo enkulu isebenza amahora angama-10-12, eyanele isidingo sosuku lonke, nokushaja okusheshayo kwamahora angu-1-2, lungela isidingo sosuku lwakho olulandelayo.
Ukuyigqoka entanyeni yakho, ungabi nayo ingcindezi, intambo enhle elengayo nesisindo esincane. Futhi kusobala ukuthi futhi kungumhlobiso omuhle. Kutholakalela nokuthi ulungiselelwe ukungena emgodini wemoto noma ubeke etafuleni noma endaweni ngombhede wakho.
Isihlanzimoyeni / Esigqokekayo / AP-W03
Ngalesi sihlanzisi somoya esigqokekayo somgexo ungazivikela kahle wena kanye nabathandekayo bakho, noma sincane kakhulu, singakwazi ukuhlanza indawo eyi-1m³ ngaphandle noma i-3m³ endlini ukudala indingilizi evikelayo. Lesi sihlanzisi somoya esiwumgexo sikhipha ukuminyana okuphezulu kakhulu kwama-ion ayizigidi ezingama-99, sihlanza umoya okukuzungezile, sikwenzele indawo yokuphefumula enempilo, susa ngempumelelo ukungcoliswa komoya njengothuli, i-PM2.5, impova, intuthu njll futhi siletha ulwandle, impophoma noma intaba eceleni kwakho. Nomaphi lapho uya khona, kuzohlanza igumbi elingu-1m around elikuzungezile, kwakha umbuthano wokugada ohamba ngezinyawo ukukuvikela. Inqobo nje uma unesihlanzisi somoya somgexo, ungakhathazeki ngenkinga yokungcola, izokugoqa ngokuphepha njalo, uzohlala usendaweni ephephile eyakudalela yona.
Lo mgexo womoya omubi nawo usebenzela ukuphulukisa ukudangala, ukuqwasha, imizwa, futhi kuthuthukise ikhwalithi yokulala, ukusebenza okuhle kakhulu okuqinisekisa ukulala kwakho okuhle nokuqapha amaphupho akho.
Ukuyigqoka entanyeni yakho, ungabi nayo ingcindezi, intambo enhle elengayo nesisindo esincane. Futhi kusobala ukuthi futhi kungumhlobiso omuhle. Futhi kuyatholakala ukuthi kubekwe etafuleni noma endaweni ngombhede wakho.
Inketho enhle yokwenyuswa komkhiqizo.
Isihlanzimoya / Esigqokekayo / AP-W04
Lesi silondolozi somoya esilula senzelwe ukulenga entanyeni, noma yikuphi lapho uya khona, i-ion engemihle ekhishwe izohlanza umoya okuzungezile, ngazo zonke izikhathi kuyakuvikela. Ungaqiniseka ukuthi unakekelwa kahle. Ungayibeka futhi kudeskithophu noma emotweni yakho. Idizayini elula nayo ingumhlobiso omuhle.
Isihlanzimoya / Esigqokekayo / AP-W05
Lesi sihlanzisi somoya esikhanyayo esihle senzelwe izingane ezilenga entanyeni, ukuma okuhle, umbala ogqamile. I-purifier ikhipha ama-ion amabi, izokuhlanza ngokuphelele amagesi ayingozi asemoyeni futhi ivikele izingane. Ungaqiniseka ukuthi izingane zakho zinakekelwa kahle. Yiyise noma yikuphi ukuvikela zonke izikhathi.
Isihlanza Umoya / Sterilizer / AP-S01
Le purifier yomoya ephathekayo ihlanganisa umsebenzi wokuhlanza umoya oqinile nomsebenzi wokuhlanzisisa. Ngobuhlalu bezibani ze-UVC ezakhelwe ngaphakathi, zingabulala ngempumelelo amagciwane namagciwane. Futhi ngezigaba zayo zokuhlanzwa ezisezingeni eliphakeme kakhulu, zonke izici zikuvikela ezintweni eziyingozi, igesi kanye namagciwane. Kwenze uphephe ku-PM2.5, uthuli, impova, intuthu, amagciwane, amagciwane, i-formaldehyde, i-benzene, i-VOCs nephunga elibi njll.
Njengokuhlanza okuphathekayo okunebhethri okungahlala ama-5hrs-8hrs, kulula ukuthi uthathe noma yikuphi. Hamba nayo, uzovikeleka ngaso sonke isikhathi.
Isihlanzimoyeni / Sterilizer / AP-S02
Inhlanganisela yemisebenzi eminingi, i-UVC sterilizer, ukuhlanzwa kwe-ion okungalungile, nokuhlanzwa kwe-HEPA, ngaphezu kwama-99% kususa ngempumelelo izindaba eziyingozi. Lesi sitshalo somoya esihlanzayo somoya zonke izici zivikela impilo yakho.
Ungayifaka ngokwezifiso ngebhethri eyakhelwe ngaphakathi, ephathekayo kunoma yikuphi lapho ufuna khona, epikinikini, emotweni yakho, kudeskithophu yakho noma eceleni kombhede wakho. Kukuvikele ngazo zonke izikhathi. Inomsebenzi we-aromatherapy futhi, yenza iphunga olithandayo, ukujabulele ngokwengeziwe ukuphila.
Isihlanzimoyeni / Sterilizer / AP-S03
Lokhu kuhlanza imodeli kusebenza nomsebenzi we-UVA / UVC wokuvala inzalo kabili ukuqinisekisa ukubulala ngempumelelo amagciwane namagciwane. Futhi ngokugxila okuphezulu kwe-ion okukhipha ukubulala izindaba eziyingozi. Isihlanzeli sikunakekela indawo ephephile.
Umklamo olula nomuzwa wesandla wenjoloba unikeza ulwazi lokunethezeka. Ngamahora amane webhethri elihlala isikhathi eside kuyenzeka uye nayo noma kuphi lapho uyidinga khona.
Isihlanzimoyeni / Sterilizer / AP-S04
Isihlanzisi somoya esilungiselelwe kalula sigcinwa nge-effeciency ephezulu ye-H13 HEPA ukuhlunga izinto eziyingozi emoyeni. Futhi kuyisitshalo esinamandla sazo zombili izibani ze-UVA / UVC umsebenzi onamandla wokubulala amagciwane namagciwane. Uphephile ngaphansi kokuvikelwa kwawo.
Umklamo wesitayela nawo ungumhlobiso omuhle. Ungayibeka noma kuphi lapho uyidinga khona.
Isihlanzimoyeni / Sterilizer / AP-S05
Lokhu kuhlanza umoya okunesitayela kwakha ubuhlalu besibani se-UV, ama-99.9% abulala ngempumelelo amagciwane namagciwane. Isayensi ikhombisile ukuthi ama-wavevelth wavelengths angabhubhisa kalula ukwakheka kwamangqamuzana e-DNA noma i-RNA kuma-virus wegciwane, kubangele ukukhula kwamangqamuzana nokufa kwamangqamuzana okuzala, ukufeza umphumela wokubulala inzalo kanye nokubulala amagciwane.
Futhi ifakwe amandla aphezulu we-ion generator, njalo lapho uphefumula, uzozizwa sengathi usehlathini.
Umklamo ohlangene awuthathi isikhala, ugijima buthule ngemuva kokusebenza okukodwa kwe -key, ukubulala kahle amabhaktheriya nezinhlayiya zothuli emoyeni. Ukuhlanzwa kwemoto yonke kukunikeza indawo ephephile futhi enempilo yokushayela, ake uthokozele uhambo olunempilo.
Le purifier yomoya elula ehlanganisa umsebenzi wokuvala inzalo nomsebenzi wokuhlanzwa komoya, futhi ngokubukeka kwesitayela kuyisinqumo esihle sokuhlanza umoya.
I-UV disinfection yayo esebenza ngochwepheshe isebenza ngamalambu ama-3 UV egcwele i-photolysis, idlulisa umoya ongaphandle iye ekamelweni lokulashwa le-UV ngemuva kokuhlanzwa, bese idedela imisebe yama-ultraviolet engu-250-270, ibhubhisa okusele emoyeni. Isakhiwo se-DNA ne-RNA kumagciwane sifeza umphumela wokubulala amagciwane. Ukusebenza kahle kuka-99.9% kubulala amagciwane namagciwane.
Ukukhishwa okungalungile kwe-ion, nika umoya ogcwele amavithamini. Ama-ion amabi abizwa ngamavithamini emoyeni, anganciphisa uthuli nokunambitha, athuthukise ukunethezeka komoya futhi adale ukuphefumula kwehlathi ngemuva kwemvula. Umklamo wokungenisa umoya ozungezile, ukulethwa okusheshayo komoya ohlanzekile ukumboza indlu yonke.
Ibhethri ephathekayo nesibambo sakho ongayisa kuso noma kuphi lapho usidinga khona, nezibani zasebusuku ezithambile ezibukekayo zobusuku bakho. Kuyisinqumo esihle sokuhlanza umoya.
Isihlanzimoyeni / Sterilizer / AP-S07
Isihlanza umoya esiphathekayo sakhiwe ngesimanjemanje, nosayizi njengebhodlela lamanzi. Kulula kakhulu ukuthi uye noma kuphi lapho uyidinga khona. Inesihlungi se-H13 Hepa esingaba sezingeni eliphakeme kakhulu ukuhlanza izinto eziyingozi emoyeni, sisuse izinhlayiya eziyingozi ezingama-99.9% njenge-PM2.5, uthuli, impova, intuthu. Akuyona i-purifier kuphela, kepha futhi iyisilonda sokuhlanza, ifakwe amalambu e-UVC / UVA LED angabulala ama-bacterium namagciwane ngempumelelo ngamaza we-wavelength. Ilusizo impela futhi iyasiza ikakhulukazi esikhathini se-covid-19, ingakuvikela kokunye okusongelayo nokulimaza, futhi ikwenze ube nesimo somzimba omzimba omuhle kakhulu.
Isihlanzisi somoya sisebenzela igumbi elingu-10m³- 15m³, ubuchwepheshe bayo bomoya oyingqayizivele budala ukugeleza komoya okuqinile futhi kuhlanze umoya ngemizuzu eyi-10. Ungalindela ukuvikelwa kwayo isikhathi eside ngempilo ye-UVC / UVA LED lights 10000 hrs. Ngayo ungahlanza izikhala zakho ezifana nemoto, igumbi lokulala nehhovisi. Kukwenza uzizwe uvikelekile esikhaleni sakho futhi kukusiza kakhulu ukuvikela umndeni wakho.
Isihlanzisi sisebenza nephunga elimnandi futhi, unganquma ukunambitheka okuthandayo. Iphinde ibe namalambu aluhlaza okwesibhakabhaka ukusho ukuthi iyakuvikela. Ebusuku, emotweni noma ekamelweni lokulala, kudala isimo sothando, kwenze ukushayela kwakho ebusuku kungabi nesithukuthezi nokukhathazeka, kepha kujabulise. Ekamelweni lokulala, akugcini nje ngokuhlanza ikamelo lakho kepha futhi kudambisa izinzwa zakho, kukhulula umoya wakho, futhi kukwenze ulale kamnandi. Kuyisetshenziswa esisizayo empilweni yansuku zonke.
Ukukhanya kwesitshalo, Isitshalo sikhule ukukhanya, Khulisa ukukhanya, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Khulisa i-Lightin,